Akanakisa Bollywood Actresses | Absolut Kufamba
Akanakisa Bollywood Actresses
Mufananidzo | Republic
Bollywood ndiro izwi rakapihwa muma70s kune indasitiri yemafirimu muIndia, iri muBombay uye mutauro unoshandiswa chiHindi. Iri izwi rinouya kubva musanganiswa pakati pezita reBombay neHollywood, mecca yeAmerican cinema iri muLos Angeles.
Bollywood mafirimu ari mukurumbira pasi rese nenhamba dzinoyevedza dzemimhanzi, dzakazadzwa nemavara choreographies ayo vatambi vanotamba kumimhanzi yechinyakare yakasanganiswa neWestern pop. Zvakare kune avo vatambi uye vatambi vemitambo, vanounza pamwechete tarenda rakakura uye runako, pamwe nemamiriyoni evateveri mukati menyika yavo uye mhiri kwemiganhu yayo.
Panguva ino, isu tinoita ongororo nevamwe veakanakisa maimhanzi muHollywood avo vakapinda mumafirimu akawanda uye nhepfenyuro yeterevhizheni. Ndivanaani vanozivikanwa?
Aishwarya Rai ndiye mutambi ane mukurumbira muIndia, ane hukuru hukuru uye mukurumbira pasi rese. Kufanana nevamwe vatambi veIndia, Rai akashandawo semuenzaniso uye akapfekedzwa korona Miss World muna 1994.
Makore mashoma gare gare, nyika ye cinema yakamuona uye akatanga kuita kwake kwekupedzisira kuma90. Aigara achibatanidzwa mukugadzirwa kwakasiyana kweIndia, achihwina mibairo yakati wandei kubva kuIndia Film Academy yemafirimu akadai sa "Hum Dil De Chuke Sanam" ( 1999) naSalman Khan na "Devdas" (2002) kwaakagovana mukurumbira naShahrukh Khan.
Pakati penyika, mutambi wechiIndia Aishwarya Rai akaitawo mumafirimu akawanda kunyanya muUnited States. Bhaisikopo rake rekutanga kunze kwenyika raive "Michato uye Kusarura" (2004), chinonakidza chinongedzo chebhuku raJane Austen rekunyora "Kudada uye Kufungira zvisizvo."
Gare gare akatora chikamu munhoroondo firimu nemutambi weBritish Colin Firth anonzi "The Last Legion" (2007). Imwe yemafirimu ake anozivikanwa kunze kwenyika yaive "The Pink Panther 2" (2009), iyo yakateerana ne "Iyo Pink Panther." Mushure meaya mafomu kuHollywood, mutambi wechiIndia akadzoka kuzoshanda munyika yake.
Uye zvakare, iye akaita kudyidzana kwakawanda seyeyekushambadzira modhi yemafashoni uye zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana.. Iye akaonekwawo pane akawanda makavha emafashoni emagazini achizvipfekedza iye mambokadzi weK Bollywood.
Mufananidzo | Outlook India
Mutambi weDenmark wedzinza reIndia ndomumwe wevatambi vemitambo vakanakisa muHollywood nhasi uye mumwe wevanotyisa zvikuru nevateveri vanosvika mamirioni 56,2 pa Instagram.
Iye akapinda munyika mabhaisikopo netsaona mushure mebasa refu semuenzaniso yemashambadziro ekushambadzira emhando yepamusoro yekushambadzira muIndia. Akabva atova chimwe chezviso zvakatsva uye zvine mukurumbira munyika uye munguva pfupi akakwakuka kupinda mufashoni yepasi rose nekutora chikamu semumiriri wezvishongo zvinozivikanwa uye zvigadzirwa zvemakemikari.
Mushure mekutora vhidhiyo yemumhanzi yaHimesh Reshammy ya "Naam Hai Tera", vatungamiriri vakamuratidzira, uye akabva angopihwa kupihwa kuti aoneke munyika ye cinema. Kunyangwe Deepika anga asina ruzivo rwakanyanya muiyi indasitiri, aida kuzvinatsiridza iye ndokunyoresa mune inoitisa academy kwaaigona kutora makirasi ekuvandudza hunyanzvi hwake pamberi pekamera.
Akaita rake rekutanga semutambi mumutambo werudo "Aishwarya" (2006) uye iyo bhaisikopo yakave hit pane yemuno bhokisi hofisi. Imwe yemafirimu yaakagashira ma rave kuongororwa muHollywood yaive "Kana Hupenyu Humwe Huri Mudiki" (2007). Nekuita kwake mariri, akagashira iyo Filmfare yeIndia Film Award uye kudomwa kwekutanga kwemutambi akanakisa.
Ipapo akagadzira mamwe mafirimu asina kukosha zvakanyanya kusvika muna2010 kubudirira akagogodza pamusuwo wake zvakare nemumhanzi "Housefull" naSadij Khan. Mu2015, Deepika akaisa nyeredzi padivi pemutambi Priyanka Chopra mumutambo wenhoroondo "Bajirao naMastani", iyo yakava yechina yepamusoro-soro firimu reIndia.
Pakati penyika, mutambi akashandawo muHollywood muna 2017 mufirimu "Three X: World Domination" kwaakagovana screen naVin Diesel.
Mufananidzo | Vogue Mexico Roy Rochlin
Priyanka Chopra ndomumwe wevakanakisa vatambi vemuHollywood uye mumwe wevakakurumbira munguva dzichangopfuura. Akasimuka mukurumbira wepasi rese neAmerican akateedzana "Quantico" (2015), kwaanotamba mumiriri weFBI uyo anofanirwa kuwana munyori wekurwiswa nemagandanga paGrand Central Station apo fungidziro dzakarembera pamusoro pake. KuHollywood akagadzirawo mamwe mafirimu akadai se "Baywatch: Los Vigilantes De La Playa" (2017), "Superniños" (2020) uye "Tigre Blanco" (2021).
Nekudaro, akange ambotora chikamu mumafirimu mazhinji eOkita senge "Don" (2006) ", chiito chinonakidza naShah Rukh Khan semubati-nyeredzi; "Krrish" (2006), ngano gamba naHrithik Roshan; "Fashoni" (2008), iyo firimu yakaiswa munyika yekumodhiza uye fashoni; "Kaminey" (2009), firimu rekuita nemutambi Shahid Kapoor; "Barfi!" (2012), "Gunday" (2014) kana "Mary Kom" (2014), firimu renhoroondo nezve uyu muOlympic mutambi wetsiva weManipur.
Priyanka Chopra aivewo anozivikanwa modhi sezvo akahwina mukombe waMiss World muna 2000, kuva wechishanu muIndia modhi yekuziviswa semukundi mumakwikwi erunako akakurumbira.
Parizvino ane mibairo mizhinji kuchikwereti chake uye pa Instagram ane vateveri vangangosvika mamirioni 62,9.
Mufananidzo | Masala!
Actress Kareena Kapoor anoburuka kubva kumhuri yevaimbi (sekuru vake, baba uye hanzvadzi yakura ivowo vatambi) saka tarenda rinopfuura nemumatsinga ake.
Akatanga kushanda pamberi pemakamera achiri mudiki kwazvo, achionekwa mune dzakasiyana kushambadzira kweterevhizheni. Kana iri bhaisikopo, akaita madhora ake muna 2000 nefirimu "Refugee", izvo zvakamupa ongororo kubva kune veruzhinji uye vezvenhau vakasarudzika uye mubairo wake wekutanga yaive iyo Filmfare yeakanakisa echikadzi kutanga kuita.
Gore rakatevera akazotora firimu "Kabhi Khushi Kabhie Gham" iro rakave iro rakakura kwazvo firimu muIndia pamusika wepasi rose.
Mumakore anotevera kuti arege kubiwa nenjiva mune mamwe mabasa, mutambi akasarudza kugamuchira mamwe mabasa anonetsa, nekudaro zvichishamisa nekuita kwake kwakawanda Mumafirimu akaita sa "Chameli" (2004) uko kwaakaita hure kwaakahwina mubairo wake wechipiri weFilmfare Award ye Best Best Performance uye mumafirimu akaita sa "Dev" (2004) na "Omkara" (2006) ayo akahwina maviri zvimwe Vatsoropodzi Mubairo weYakanakisisa Actress.
Mutambo "Jab We Met" (2007) inotungamirwa naImtiaz Ali zvakare yakawanisa Kapoor mubairo weBest Actress weFilmfare. Kubva ipapo, ave nebasa rakareba uye rakabudirira uye akawana rudo rweveruzhinji, nekudaro achive mumwe weanogona kwazvo epanguva ino maActressist vateveri vanopfuura mamirioni matanhatu vateveri pa Instagram.
Mufananidzo | Vogue India
Bipasha Basu ndomumwe wevanozivikanwa vatambi veIndia uye wechokwadi Indian celluloid diva uyo ane tarenda rake uye runako akwanisa kuyambuka miganhu yayo. Parizvino ane vangangoita mamirioni 9 vateveri pa Instagram.
Kufanana nevamwe vepamusoro Bollywood vatambi, Bipasha akaita nhanho dzake dzekutanga kupinda munyika yemafashoni uye akatanga basa rake rakabudirira muindasitiri iyi achiri mudiki, aine makore gumi nemanomwe chete. Mumakore ekuma17, akahwina mumakwikwi eSupermodel yeCinthol Godrej uye mukurumbira wepasi rose Ford supermodel mumakwikwi. Izvi zvakaita kuti zvikwanisike kuti ashande semuenzaniso muNew York, sezvaakasaina kambani yeFord, uye kuti aoneke pane anopfuura makumi mana makavha emafashoni emagazini.
Semutambi, akaitisa zita rake rekutanga pachiratidziri hombe nemufirimu "Ajnabee" (2001), izvo zvakamupa mubairo weFilmfare for best female debut. Gore rakatevera kwakauya kubudirira kwake kwekutanga kwekutengesa nefirimu rinotyisa "Raaz" (2002) iro raakapihwa mubairo weFilmfarement mubato remutambi wepamoyo.
Gare gare akazotorawo mamwe mafirimu akakurisa muIndia senge ma comedies "Hapana Kupinda" (2005), "Phir Hera Pheri" (2006) uye "Zvese Zvakanakisa: Mafaro Anotanga" (2009).
Mumakore iwawo akagashira kurumbidzwa kukuru nekuda kwemitambo yake mune anotyisa mafirimu Aatma (2013), Chisikwa 3D (2014) uye Ndega (2015) uye mune yekudanana komedhi Bachna Ae Haseeno (2008). Mamwe emabasa ake achangoburwa muHollywood aive Humshakals (2014) uye Zvisikwa (2014).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Akanakisa Bollywood Actresses
Hongu Aishwaria akanaka uye ndakazvinzwa asi kwandiri Kajol achiriyekunakisisa uye akanakisa weIndu mutambi ...
Zvakanaka Aishwaria akanaka asi Kajol akanaka uye ane tarenda
kana ini ndichifunga zvakafanana
Kajol anokukunda, asi haufanire kuzvarwa patsva ipapo kana iwe uchizonaka, ha ha, iko kuseka, haufunge?
kajol ruva rakanakisa rerosi
Ini handidi kurega chero munhu kana kuenzanisa nekuti hapana kuenzanisa kunogoneka. kajol semutambi anoyevedza nekuti anoita kuti vese vatambi vaanotamba vavimbike uye kuti akanaka sei iye mukadzi wenyama nemapfupa, akafanogadzira asina mhosva brabo iwe kajol
kajol ndiye mutambi akanakisa wandinoda kumuona murudo rwangu rwekutanga na sharuck khan zvinotyisa
Pindura kuna yu
rakandinakira kajol ndiye akanakisa wemuhindu mabhaisikopo uye akanaka ini ndaimuda iye movie rudo kurwisa mukobvu uye mutete tkm kajol ndiwe wandinofarira ok
Aishwarya Rai ndiye mutambi wangu wandinofarira muIndia yese
Ini ndaizoda kuve iye mutambi wemuHollywood saiye
Bombay yakanakisa !!
pasina kupokana hapana chikonzero chekuenzanisa nekuti tarenda rekajol nerunako rwake hapana anozvipfuura kana nyika yangu inonzwisiswa
MARISABEL ARACA akadaro
KAJOL YAKANYANYA KUKONZESA ………… ZVAKAJANJIKA KUPFUURA SIIIIIIII
Pindura kuna MARISABEL ARACA
Batsira munhu wese.
KAJOL NDIYO WANGU WANDINODA KUSHANDISA UYE KUZIVA ZVIMWE SHARUKH KHAN NDINODA VAVO
Rega munhu wese azive uye azvigamuchire, kuti chete Kajol ndiye akanakisa kana …… ..
mafirimu kajol uye sharukan akanaka kwazvo ivo vanoita vaviri vakanaka
vakanaka kwazvo vevadzikadzi vacho kareena kapoor, aishwarya rai, kajol
Kajol mukadzi akanaka kwazvo uye ane mukurumbira uye akazara neakazara mweya charisma.
Ndiri mumwe wevateveri vaKajol, zvakanaka vanoitawo duet neSRK
shasha, ndinodawo cinema yechiHindu, ndinoyemura munhu wese
Ivo ndivo vakanyanya kunaka. tumira mamwe mafoto uye ako maedecdotes
lady carol akadaro
kajol ndiyo yakanakisa kupfuuraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hapana akafanana newe
Pindura kuna mai karol
Kajol akanaka kwazvo uye mutambi akanaka, anosetsa, anotamba chaizvo .. ndiye akanakisa!
Pindura kuna karen
ERIKA GUSMAN akadaro
Pindura kuna ERIKA GUSMAN
KAREN GUSMAN RAMOS akadaro
KAJOL NDIWE UNOTARIRA MUTAMBI WEKUHINDU CINEMA NECHARISMA YAKO UYE ZVINOKOSHA UNOITA KUTI NDIKUDZE ZVAKAWANDA UYE MAFILIMU AKO NASHUKU VAKURU… .GADZIRAI KAJOL… VANOGADZIRA VANHU VAKANAKA ASI Wakatoroorwa ...
Pindura KAREN GUSMAN RAMOS
Vazhinji vanoti ndiwe wakanakisa nekuti vanoona runako rwako rwekunze urwo rwausingakwanise kuviga asi vanokanganwa kuziva kuti uri sei chaizvo semunhu uye ndicho chinhu chakakosha, hazvina kunaka kuda rwekunze kana rusiri rwemukati sezvandakaita.Iwe ndiwe mutambi wepamusoro muIndia yese kubvira paunenge uchizviita uchinzwa, chimwe chinhu chakatokanganikwa nevatambi vazhinji ... kwaziso zhinji Mai Kajol Devgan kubudirira kwakawanda uye kwakanakisa iwe nemhuri yako usatombokanganwa vanoyemura vako vanobva pasirese pasirese uye pamusoro peizvi zvese vanoyemura vanovimbika ... ndinotarisira zuva raunogona kuuya kuPeru uye nokudaro uzokwanisa kuve nemufaro wekusangana newe mumunhu nekuti dai zviri kwandiri Ndingaite chero chinhu kuti ndingori 1 min padivi pako .. bye ... Ndinovimba iwe unogona kuverenga iyi meseji rimwe zuva .. chengeta atte miki
Eliama gaviota akadaro
Hongu zvirokwazvo ane runako rukuru uye nenzira yandinonyanya kufarira muHindu cinema ndiri pakatarisira kuratidzwa kwevatambi vese vatambi vakaita saKajol, Ash, Preity, Rani nezvimwe, zvevarume SRK, Roshan, Salman, mu chokwadi ini ndiri munhu anofarira vese vatambi uye maateki avo andinoziva uye ini ndinoziva zvakanyanya
Kisimusi yakanaka yeKrisimasi kune vese
Pindura kuna Eliama Gaviota
Ini handizive izvo zvavanoona Kahol asi chinhu chimwe ndechekusuwa nyika uye modhi pakati pezvimwe zvinhu uye chimwe chinhu ndechekuti vanovada
sei vachivapa marwadzo mumamovie avo
asi kwandiri uye for and and for the most ndiyo chete aishwarya rai kana zvisiri kuenzanisa mafoto uye nezvimwe
Pindura kune sandrita
Aswaira ndeye asQo! 100% KAJOL .. uye zi stuviera RANI inokunda zvese :)!
Mhoro ndinokunyorera iwe kubva kuBOLIVIA KWEKAJOL CHINONYANYA KUNAKA UYE CHINONYANYA KUNYANYA NEKUTI AIS HAZVIMWE ZVINO CHOKWADI CHAKANAKA
Pindura kuna BEATRIZ
o hongu ps uye nenzira kajol inogadzira vaviri vakanaka kwazvo ne shahrukh khank
Ivo vanowirirana kwazvo ivo vese vari vaviri vakanaka vatambi uye zvinofanirwa kuwanikwa mune yekupedzisira bhaisikopo izvo vaviri vacho vakaita pamwechete izvo zvinovaita vakasarudzika
anonzi ani ma actress, zviripo zviri ZVAKANAKA
Mhoroi munhu wese; Kwangu, Kajol ndiye akanakisa kwete chete nekuda kwerunako rwake, asiwo nekuda kwehunhu hwake hwekududzira.
Maria Nyasha akadaro
kwandiri vanoita kunge vakanaka ivo vese vanoita zvirinani mumamovie kwandiri ivo vese vakanaka
Pindura kuna Maria Nyasha
akanakisa ndiye kajo pasina kupokana ray ews akanaka asi haana muviri akaita sedanda asi kajol ndimwarikadzi ane chiso ichocho muviri iye akakwana zvakanaka bye
Ini ndinofunga zvakanaka kuti kajol, uve mutambi akanakisa
Pindura kune beatriz
tsime kajol runako uye mutambi akanaka
Kajol yakanyanya kunaka mukati nekunze!
MARI SEA akadaro
VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU SHARUKHAN UYE KAJOL VANOSHAMISA
VANOSHAMISIRA UYE VAKAWANDA VANHU VANOFANIRA
Pindura kuna MARI MAR
KAJOL CHAKANAKIRA UYE CHINONYANYA KUKOSHA KWEMAITIKO OSE, MWARI VAKUKOMBORESEI MESE, ZVIKURU MAZVO
herlinda mwenje akadaro
Kwandiri ivo vese vane tarenda asi ini ndinofunga chakanakisa kajol uye chandinonyanya kufarira nezvake chiso chake
Pindura kuna luz herlinda
zvakanaka kuva nevatambi vakanaka sa kajol uye sharukhan
Maria Gomez akadaro
Kune kajol kangu akanakisa senge kumeso kwemutambi kwakanaka kwazvo uye ndinomuda mafirimu
Pindura kuna maria gomez
lucero martin akadaro
olz kajol ndinokuyemura zvikuru
Pindura kuna lucero martin
Runako runopenya kwese kwaanoenda uye hunyanzvi hwake mucherechedzo wekuyemura usingagone kufuratirwa, kunyanya kana ari mukadzi akangwara zvechokwadi, tenda Mwari nekutumira mukadzi akanaka uye akangwara pasi rino. Makorokoto angu uye iwe uchiri akanaka sezvauri, ini ndiri nhamba yako 1 mafeni, kutsvoda
hl zita rangu ndinonzi sara uye kwandiri zvese indu acrisaz akanaka uye anoda indu mafirimu ndinovada
ARIS OCHOA akadaro
YAKANAKA BOLLYWOOD IS kAJOL, ICHOKWADI CHINOKOSHA, Uye CHETE ZVAKANAKA ZVESE, NDAKAONA VANHU VAKAWANDA VEHINDU uye HANDINA KUONA CHINHU CHAKAITIKA SIYO NECHECHOKWADI, FILAMU DZAKANAKA ZVINOITWA NESRKAJOL SEYAKAKONZESA HAY COUPLE .
Pindura kuna ARIS OCHOA
John Velarde akadaro
Kubva kuPeru, Kajol ndiye akanakisa uye akazara Indu mutambi wemafirimu, nekuti pamusoro pekuita anoimba uye anotamba zvinoshamisa Kavool Kajol
Pindura kuna john velarde
Nhasi ndaona PYAAR TO HONA HI THA, naKajol naAjay, ini handizive zvekutaura nezvaKajol, ini ndagara ndichitaura kuti iye ihunhu mukutamba, iye mutambi wekuti chimiro chega chega chinokodzera maari, iye yakanaka kwazvo, yakachena patsva, yakakwana. Ini ndatoona mafirimu mazhinji ake uye Ajay mutambi akanaka chaizvo chokwadi vaviri vakaroorana SrKAjol, ndinozvitaura nebase, iye ICON DIVA QUEEN, ndinozvipokana asi zvinonetsa kuwana mutambi ane zvese mukati mumwe saKajol, ndinotarisira kumudzosa kuti aone mufirimu nyowani uye ndinonzwa kumuyemura ……
Pindura kune aris
Kubva kuIquitos-Peru Kajol ndiyo yakanakisa. Ndave ndichimutevera kwemakore makumi maviri kubvira pandamuona bhaisikopo kuch kuch hota hai.
Kutakura muUnited States